Fanajariana ny eto an-drenivohitra :: Mitohy ny fifampiresahana amin’ireo mponina amoron’ny lakandrano C3 • AoRaha
Fanajariana ny eto an-drenivohitra Mitohy ny fifampiresahana amin’ireo mponina amoron’ny lakandrano C3
Ao anatin’ny fandresen-dahatra sy ny firesahana amin’ireo olona voakasiky ny fanadiovana ny lakandrano C3 ireo tompon’andraikitra misahana ny tetikasa « Produir », amin’izao fotoana izao. Tsy nisy, araka izany, ny fanombanana ny fananan’ireo mponina manemitra an’io lakandrano io, izay tokony ho natomboka tamin’ny voalohan’ny volana marsa lasa teo. Tsy maintsy harodana ny trano maromaro miala 8 hatramin’ny 16 metatra, ilaina amin’ny famoronana lalana hahafahan’ny olona sy fiara mifamezivezy, manomboka eo Anosibe hatrany Ambodimita mandalo an’Andavamamba, 67Ha, Ankasina, Antohomadinika.
« Miahiahy ny ankamaroan’ny mponina. Tsy azon’izy ireo ny fepetra rehetra manodidina ny fanadiovana an’ity lakandrano C3 ity. Saika tsy manara-dalàna avokoa ny ankabe­azan’ny trano miorina manamorona azy. Ny eto Ankasina no tena betsaka voakasika, araka ny fanadihadiana natao tamin’ny taona 2018. Naharay fitarainana avy amin’ireo voalaza fa voakasika izahay, ka efa nalefa any amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra. Misalasala ny olona hoe hiala sa tsia”, hoy ny lehiben’ny fokontanin’ Ankasina, Ranaivoarivony Johnson.
An-kilany, nilaza ny mpiandraikitra ny tetikasa fa hatao, amin’ny 6 avrily hatramin’ny 17 jona 2020, indray ny fanombanana ny fananan’ireo voakasika, toy ny tany sy ny trano ary ny foto-pivelomana. Fampahafantarana sy fanentanana azy ireo mikasika ny tetikasa aloha no hatao. Efa misy toerana hametrahana sy hamindrana an’ireo olona tsy maintsy miala kosa eny Andavamamba, Soavimasoandro ary Anosiala.
Fanatsarana ny fitaterana :: Raikitra ny tetikasa fampidirana taksibe vaovao
Fampitokana-monina ny mpandeha :: Hiara-hiasa amin’ny trano fandraisam-bahiny ny fanjakana